TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH! – filazantsaramada
TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!
Publié parfilazantsaramada	 novembre 7, 2014 Laisser un commentaire sur TSARA, TSARA, TSARA JEHOVAH!
« Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy. Matahora an’i Jehovah, hianareo olony masina; fa tsy hanan-java-mahory izay matahotra Azy. Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy ho orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:8-10
Tanora iray afaka manandrana zava-mahadomelina omen’ny namany azy, ary rehefa avy eo tsy afaka fa miankina amin’ny fandraisana izany, na dia tsy manam-bola aza, dia voatery mivaro-tena na mangalatra mba hahazo izany noho ny filàna ao anatiny! Hoy ny Soratra Masina hoe: malalaka ny làlana mankany amin’ny fahaverezana, fa tery kosa ny làlana mankany amin’ny Fiainana. Ny mpanao Salamo eto dia mitaona antsika hanandrana an’i Jehovah, fa ny devoly kosa dia maka fanahy antsika amin’ny zavatra mirentirenty sy mora atao, ary ny hazo fijaliana toa tsy dia mahasarika ny tanora amin’izany maha hazo-fijaliana azy izany. Nefa efa mba nanadrana tokoa izany hatsaran’i Jehovah izany ve isika? Andramo ka izahao fa tsara Jehovah! Misy kosa ireo efa nanandrana, ka nahita ny fahatsaran’izany miaraka amin’Ilay Andriamanitra. Toy izany ireo olona efa
nanandrana ny finoana Azy tamin’ny fahajambana, tamin’ny aretina mafy, tamin’ny halemena, ary indrindra tamin’ny tsy finoana ary nahatsapa ny hatsaràny. Sambatra izay olona mialoka Aminy! maro ny zavatra mihatra amintsika raha eny am-pandehanana, ao ny hainandro, ao ny orana, ao ny havandra aza, ary mila fialofana isika amin’izany. Fa ny ambara indrindra dia ny zava-mitranga eo amin’ny fiainantsika ara-panahy aza, ary hoy Soratra masina hoe isika tsy miotolona amin’ny nofo amandrà fa amin’ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra, ka fiadiana hafa mihintsy no ilaintsika fa tsy basy na tafondro no ho entina miady amin’ny fanahy ratsy fa ny Fanahin’Andriamanitra. Sambatra izay olona mialoka Aminy! Ny devoly matahotra na miorohoro manatrika an’i Jehovah, fa tsy mety mankato Azy izy. Fa raha ny olona masina kosa no matahotra an’i Jehovaha dia hafa ny vokatra: Tsy hanan-java-mahory ny olomasina matahotra Azy!
Izay mitady an’i Jehovah tsy ho orin-javatsoa akory: Mitady! Atao ahoana kosa ary no fitady an’i Jehovah? Hoy ny Soratra Masina hoe: »fa na aiza na aiza no iangonan’ny roa na telo amin’ny anarako dia eo afovoany Aho » Matio 18:20. Hoy ianao hoe izaho irery no te hitady azy izao fa tsy misy namana aho: hoy ny Tompo aminao! « Fa hianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin’ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin’ny Rainao, Izay ao amin’ny mangingina; ary ny Rainao, izay mahita ao amin’ny mangingina, no hamaly anao. Andramo ka izahao fa tsara Jehovah!
Ny Tompo Jesosy anie hampahery anao!
Publié parfilazantsaramada novembre 7, 2014 Publié dansUncategorized
Fananganana fiaraha-miasa vaovao
Fiaraha-miombon’antoka Fiangonana/Feon’ny Filazantsara (FF)